माओवादी केन्द्रको समानुपातिक सूचीमा तपाईको नाम पर्यो ! को–को परे (नामसहित) - samayapost.com
माओवादी केन्द्रको समानुपातिक सूचीमा तपाईको नाम पर्यो ! को–को परे (नामसहित)
समयपोष्ट २०७४ माघ २९ गते १५:३७
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समानुपातिकतर्फका सांसदको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार पार्टीले प्राप्त गरेको १७ जना सांसदमा खस आर्य महिलाबाट पाँच जना निर्वाचित गर्न सूची पठाएको छ ।
त्यसमा रेखा शर्मा, पूर्णकुमारी सुवेदी, धर्मशिला चापागाईं, सत्या पहाडी र सीता पोखरेल हुनुहुन्छ । शर्मा पूर्वमन्त्री एवं सभासद् हुनुहुन्छ । सुवेदी पूर्वउपसभामुख, चापागाईँ पूर्वराज्यमन्त्री र पहाडी पूर्वमन्त्री हुनुहुन्छ । पोखरेल भने माओवादी केन्द्र महिला संगठनका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
यस्तै आदिवासी जनजातिबाट जयपुरी घर्ती, शशि श्रेष्ठ, ओनसरी घर्ती, यशोदा गुरुङ र अमृता थापा रहनुभएको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिनुभयो । जयपुरी पूर्वमन्त्री तथा ओनसरी पूर्वसभामुख हुनुहुन्छ । यस्तै दलित महिलाबाट अञ्जना विशंखे र दुर्गा विकलाई चयन गरेर सूची बुझाइएको छ ।
मधेसी समुदायबाट इन्दु शर्मा र बोधमाया यादव छनोट हुनुभएको छ । थारु वा मुस्लिमबाट रामकुमारी चौधरी र शेष चाँदतारा चयन हुनुभएको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता भुसालले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’बीच आज भएको छलफल सकारात्मक भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले एकताका सन्दर्भमा आजको छलफलले केही सकारात्मक गति लिएको र एकाध दिनभित्रै सार्थक निष्कर्षमा पुग्ने राससलाई बताउनुभयो ।
“छलफल असाध्यै सकारात्मक छ । एकाध दिनभित्रै सार्थक परिणाम निस्कन्छ”, प्रवक्ता भुसालले भन्न्ुाभयो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच आज एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको थियो । मंगलबार अध्यक्षद्वयबीच एक्लाएक्लै पुनः भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।रासस